Qarsoon: Habka ugu fudud ee lagu ilaaliyo xogtaada shakhsiyeed | Laga soo bilaabo Linux
Qarsoon: Habka ugu fudud ee lagu ilaaliyo xogtaada shakhsiyeed
Ka soo qaad in aan hayno galka macluumaadka ka buuxo oo aynaan rabin in qof kale arko (pr0n, dukumiintiyo muhiim ah ... iwm) oo waxaan si fudud u dooneynaa inaan ilaalino. Sideen u qabanaa? Hagaag, sirta faylka la yiri ama waxyaabaha ku jira.
Qubays waa codsi noo oggolaanaya inaan faylalkayaga sidan ugu ilaalino qaab aad u fudud. Dabcan, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa rakibida arjiga, oo kujira keydka Debian y Ubuntu (Ma aqaano inay kujirto qeybaha kale ee qeybinta).
Marka laga hadlayo Xfce, dalabka ayaa ka muuqda Nidaamka Codsiyada »Nidaamka. Markaan socodsiino, waxay ka soo muuqanayaan Nidaamka Tray (saxaarad) astaan ​​noo oggolaan doonta inaan maamulno xulashooyinka Qubays.
Waxaan ku gujineynaa astaanta badhanka bidix ee bidix, waxaanna haysannaa laba ikhtiyaar:
Xaaladdan oo kale waxaan xiiseyneynaa abuuritaanka a Fayl cusub oo sir ah, markaa waxaan gujineynaa xulashadaas waxaana helnay daaqaddan:
Waxaan marki uguhoreysay kadhigay feylkeyga / guriga wac Personal, kaas oo ku dhexjira galka sirta ah, oo aan wici doono Primado. Marka magaca la galo, waxaan gujinnaa badhanka Adelante codsiguna wuxuu na weydiin doonaa lambar sir ah galkaan:
Waxaan dhigeynaa lambarka sirta ah ee aan dooneyno waxaana siineynaa badhanka Adelante, markaa galka ayaa si guul leh loo abuuri doonaa:
Laga soo bilaabo xilligan waan awoodnaa Isku soo duub / Ka deg galkayaga sirta ah (encryption) adoo adeegsanaya astaanta saxaarada.
Haddii aan kala furfurno oo aan dib u uruurino, waxay na weydiin doontaa lambarka sirta ah ee aan markii hore galnay. Ee doorbidida Qubays (dhagsii badhanka midig ee jiirka saxda ah astaanta saxaarada), waxaan ku dooran karnaa feyl faylka aan dooneyno inaan ku furno galka. Markii hore waxay la timid Nautilus, markaa waan u beddelay Thunar:
Faahfaahin muhiim ah: xaqiiqda fudud ee kartida sir / sir Faylku macnaheedu maahan inaan gebi ahaanba la tirtiri karin, iyo waxa ku jira oo dhan. Hab kale oo loo ilaaliyo macluumaadkayaga ayaa ah iyadoo la adeegsanayo Sawir gacmeedka oo waxaan horey uga soo hadalnay arji in noo oggolow inaan sidan yeelno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qarsoon: Habka ugu fudud ee lagu ilaaliyo xogtaada shakhsiyeed
Aad u wanaagsan ... in lagu daro nidaamka bootka ee XFCE waa sidee?
Ku jawaab ragm83
Ma taqaanaa sida loogu daro codsiyada bilowga?
ee Settings / Manager Manager / Fadhiga iyo Startup / Application Autostart iyo Add? 🙂
Sida saxda ah .. ^^ waa inaad kudartaa arjiga si uu ubilaabmo marka kalfadhigu bilaabmayo 😀
Waan dhammeeyay, horey ayaan u sameeyay ... xitaa sidaas, waad ku mahadsan tahay weydiinta haddii aad ogtahay! 🙂
Haye, aad u wanaagsan, in cabbaar ah waxaan u raadinayay wax sidaas oo kale ah Ubuntu, wixii aan sameynayay waxay ahayd badalida rukhsadaha galka laakiin tan waxaan ku badbaadin doonaa dhowr talaabo
Waayahay, waxaan isku dayayaa barnaamijkan.
wajiga, waxaan gostei muito sameeya deegaankaaga shaqada, ma ii sheegi kartaa waxa uu yahay iyo wax ka beddelku waa colocou? > Obrigado
Wanaagsan, fudud oo dhakhso leh, mahadsanid.
Waxaan ku rakibay qolofta Gnome laakiin markaan rabo inaan maamulo waxaan hubiyaa inaan xubin ka ahay kooxda Fuse, ma haysaa wax fikrad ah oo ku saabsan wadada loo maro baadhitaankan?
Marka hore hubi in kooxda caymiska Way ka jirtaa / iwm / kooxo. Hadday sidaas tahay, ku dar magacaaga isticmaale:
Mahadsanidiin elav, waxaan kudarey isticmaalaha kooxda fiyuus-ka wayna shaqeysaa, laakiin hada dhibaatadu waa furitaanka galka, markaan rabo inaan sameeyo sanduuqa wadahadalka ayaa umuuqda isagoo leh feylka kuma jiro fstab (adiguna ma tihid isticmaale asalka ah) inaad kala furfuro sida kaliya ee aan kuhelay waa xiritaanka kalfadhiga, ma haysaa wax talo bixin ah oo aad ku xalin karto?
Taasi waa yaab Oscar. Ma noqon kartaa inaysan aniga igu dhicin maxaa yeelay adeegsadehaygu wuxuu leeyahay rukhsad xidid leh sudo? : S
Wanaagsan elav, waxaan siiyay rukhsadeyda isticmaale ruqsad sudo, laakiin isla farriinta ayaa sii wadata inay muuqato, mar labaad ayaan sameyn doonaa howsha rakibida iyo qaabeynta si aan u arko waxa dhaca
Maxaad sameysay si aad u siiso rukhsad siiyahaaga isticmaaleha ah? In kastoo aan kuu sheego, haddana ma hubo inay taasi tahay xalka. Ma jiraa qof kale oo soo bandhiga dhibaatada Oscar?
Wax ka beddel faylka iwm / sudoers si aad ugu ekaato sidan:
xididka DHAMMAAN = (DHAMMAAN: DHAMMAAN) DHAMMAAN
U oggolow xubnaha kooxda sudo inay fuliyaan amar kasta
% sudo ALL = (ALL: ALL) DHAMMAAN
# Ka eeg sudoers (5) wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan dardaaranka «#include»:
#ku dar /etc/sudoers.d
In terminal sudo si sax ah ayuu u shaqeeyaa.
Hagaag, si faahfaahsan oo ah "nabadgelyo-darro" maxaa yeelay si kale uma dhihi karo, waxa aan sameeyo ayaa ah inaan fuliyo sudo aan lahayn erey sir ah, iyadoo xariiqda loo dhigayo sidan:
Aynu aragno haddii qof uu ku rakibayo archlinux, kuma kari karo yaourt ama ururinta pkgbuild
ikhtiyaar kale oo fudud oo konsol ah: ccrypt
laakiin taasi waa in wax walba lagu sameeyo qunsuliyad, sax?
haa, faylka ccrypt -e <- sir ah
faylka sirta-d <- warqad
faylka 'ccrypt -r -e' <- ku kaydi dhammaan faylasha galka si tartiib tartiib ah iyo -d si looqeexo si macquul ah
waxay ku jirtaa meelaha loo yaqaan 'debian repos'
ereygu waa sir / xarago
Mana fududa in la dhigo a . magaca galka ka dibna ku qarin faylka faylka biraawsarka?
faylkuna wuu ka baaba'aa aragga dadka kale oo dhan ... oo sidaasuu u muuqdaa Ctrl + H
Haa, laakiin taasi amaan maahan, maxaa yeelay qof yaqaan Linux ayaa yimid oo ka furaya jiida, miyaadan u malayn?
Nin, waxaan u maleynayaa inay taasi sahlanaan laheyd sax? Kaliya waa inaad muujisaa feylasha qarsoon iyo Voilá! Helitaanka buuxa ee dukumiintiyadaas ama faylasha aad rabto inaad qariso ...
Waxaan adeegsaday run iyo xaqiiqo
Sidee ku saabsan doorashadan?
Codsigani waa uun dhamaadka hore ee EncFS.
Aniga oo ka faa'iideysanaya mowduuca ku saabsan aaladaha asturnaanta ee maqaalka, waxaan jeclaan lahaa in aan su'aal ka weydiiyo qalab kale oo aan dhibaato ku qabo.
Waqti ka hor waxaan raacay casharro si aan ugu ilaaliyo faylalka xogta shakhsiyeed (nidaamka Linux). Nidaamku wuxuu oggolaaday in la qariyo galka adoo u sii gudbinaya dukumiinti qoraal ah (.doc), kaas oo markii la furo kaliya muujinaya sawir, dukumintiga gudihiisa, halkii uu galka ka ahaan lahaa.
Waxaan u calaamadeeyay boggaas casharka markii aan u baahnaa inaan dib u dhigo galka, laakiin nasiib daro hal munaasabad markii aan nadiifiyey nidaamka, ma aanan taageerin calaamadaha, mana awoodin inaan dib u helo casharkaas.
Hadda ma soo ceshan karo galka feylka loo asteeyay ".doc".
Ma jiraa qof idinka mid ah oo garanaya aaladda ama arjiga kuu oggolaanaya inaad sameyso nidaamkan oo aad ku qariso galka u rogo feyl qoraal ah (.doc) kaas oo kaliya sawir lagu soo bandhigo?
Haddii uu jiro qof garanaya, waan ku faraxsanahay haddii aad ii soo gudbiso macluumaadka.
Ma ahayn mid ka mid ah labadan qaab?
Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada, Elav. Nasiib darrose may ahayn mid ka mid ah labadaas qaab, maxaa yeelay midkoodna kuma qarsoomayo galka dokumenti, laakiin muuqaal ahaan (ama maqal ahaan) faylal. Qaabka aan u adeegsado wuxuu u maraa galka dokumenti halka kaliya hal sawir lagu arko. Xaqiiqdii, sawirka ay muujineyso maahan mid ka mid ah kuwa aan ku haysto mashiinkeyga, maadaama waxa ay muujineysaa ay yihiin WInnie the pooh (haha, iyo sidoo kale, waligey kuma soo degin sawir orso ah)
Codsi aad u wanaagsan, waxaan raadinayay wax sidan oo kale ah muddo dheer waana ay i caawisay, waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta… .waxaa wanaagsan.
Jawaab Tony Reyes
Waad ku mahadsantahay faallada 🙂
Ku soo dhawow goobta.
Ma u shaqeeyaa qayb ka mid ah drive adag?
Barnaamij weyn. Waxaan in muddo ah u isticmaalayay, qofna ma garanayaa inay gebi ahaanba ammaan tahay? Mise way ka ammaan badan tahay in la isticmaalo nooc kale oo steganography ka badan oo buug ah?
Qaali, sidee baan u sameeyaa feyl-keydka sirta ah iyo shabakadda la wadaago weydiiyo dadka isticmaala Windows-ka lambarkooda sirta ah
hi ma heli karo in aan ka shaqeeyo debian osc ee vmware mase fadlan
Caawinaad fadlan Ma ka dhigi karo inay ku shaqeyso debian gudaha vmware-ka waxay ku rakibtaa dhibaato la'aan laakiin ma sameyso wax aysan xitaa fureyn ma muujineyso astaanta furaha waxba kama caawiso
hello waxaan ilaaway erayga sirta ah ee aan galiyay galka meesha aan ku keydiyo faylalka muhiimka ah ee aan sameeyo
8th Latin Latin Festival of Software Rakibaadda Bilaash ah 2012
Muxuu Skype ahaa, waxa weli jira iyo waxa suuragal ah inuu ku jiro nooca HTML5